Buttock nokwengezwa nge asidi i-hyaluronic: Izibuyekezo
Impilo, Isigenco esiwela kwesokudla
Buttock nokwengezwa - yinqubo evamile emitholampilo ezikhethekile. Amantombazane amaningi akholelwa ukuthi isici okufana izibalo zikhange kakhulu futhi sexy. Ngokuvamile lokhu okwafezwa yenzeka noma asidi i-hyaluronic.
"Macrolane" kanye nezici zayo
Lesi sidakamizwa manje kuphela esetshenziselwa nentaba ngobuningi Plastics. Ukwanda emathangeni nezinqe, kanye umlomo kanye nezinye izingxenye zomzimba senziwa okusekelwe kuso.
Inkampani-kunjiniyela sokulungiselela Q-med atshalwe ukuthuthukiswa esikhwameni salo, manje umnikazi okukhethekile amalungelo womshini yayo futhi ukudayiswa. Izindleko "Macrolane" eside, kusukela akanasabelo izimbangi.
Ukwanda izibunu akuyona inqubo kuphela owenziwa ngosizo lokhu izidakamizwa. Okuningi kaningi isetshenziselwa esifubeni. Esebenzisa yamathebhu kungenziwa wanezela usayizi 1, kungekho isidingo sokuya ngaphansi ummese wahlushwa isikhathi eside ukuvuselelwa.
Futhi indlela ayisebenzisayo ngesikhathi ngokugcwalisa nezibazi Buyisa uphinde nentaba ngenjongo bokuhlinzwa kokulungisa ezindaweni ezibucayi.
inqubo enjalo, njengoba sekwande ezinqeni ka asidi i-hyaluronic, kungenzeka uma usebenzisa "Macrolane" lapho kungukuqiniseka asebenzayo. Kulokhu lokuhlushwa ayinto kuyinto ngempela ukwanele ijeli kwabantu okuhle.
Ngaphambili, uphakamise izwi we izibunu nezinye izitho zomzimba aphethwe fillers non-absorbable. ezisisekelo sazo wawuyingxenye ijeli polyacrylate, upharafini liquid, kanye nezinye izingxenye. Nokho, inzuzo enkulu ka asidi i-hyaluronic phambi kwabo - kungcono zemvelo, kuba kuyingxenye yethu.
Lapho iqondiswa lingena ukusabela kwamakhemikhali ngomzimba wethu, bese ezidabula okukhiphayo. Kakhulu, ngokwemvelo.
Buttock nokwengezwa, kanye nezinye izingxenye zomzimba, kuyinto efiselekayo ukwenza lapho kuboniswe. Kungenjalo, imitholampilo ikhasimende isengozini eshaqisayo yokuba bezihlanganisa nebutho ngesimo futhi edumele, izibuyekezo ngokuvamile zitholakala kwi-inthanethi.
Ngokwesibonelo, uma kuziwa amabele ke uyinike ivolumu enkulu, ngakho ungeyena badumazeke e umphumela, kungcono uma incane, futhi nokunwebeka futhi ukuthembela kwalokho e inani usayizi 1 kuphela. Kodwa labo abafuna ukwandisa ke lesibili nobukhulu lesithupha, kungenzeka ukuba saneliseke.
Lapho ukuma ezinqeni?
Kulokhu, kufanele kwenziwe uma kukhona asymmetry noma alanele. Futhi ukwandisa ezinqeni ingxenye hyaluronic nge ukungenzi izindwangu bazo nobudala ushintsho noma ehlome wokulahlekelwa isisindo eqinile.
Khumbula ukuthi ijeli sinesikhundla elinganiselwe, futhi ngendlela emangalisayo inani elilodwa noma kwenye ingxenye yomzimba ngendlela ngeke zisebenze. Kodwa wakubeka ukuze futhi wenze okwengeziwe some ngempela ngempela.
Izici ukulungiswa ivolumu umzimba
Sesiyazi sakhuluma ngalokho ukukhuphuka esithile ezinqeni. Izibuyekezo iziguli umtholampilo uzokhombisa ukuthi unalo igciwane, uma they sondela inqubo nge ingqondo kucatshangelwa ubufakazi. Ngaphezu kwalokho, umuntu akufanele alindele imiphumela kwemvelo.
Ngokuyinhloko "Macrolane" isetshenziselwa ezifana:
ulungisa ezingemuva izandla neminwe lapho ehlambulula kwesikhumba;
wenza nentaba plastic izindawo zangasese (yenyusa umthondo ezingabantu kanye labia kwabesifazane);
ngokugcwalisa izingxenye engalingani ku nezicubu ongama, okuyinto kuwumphumela liposuction;
ukwandisa noma kuqedwe asymmetry;
fihla ezithambile izicubu ukukhubazeka ngemva ukulimala kanye nokusebenza.
Izinzuzo usebenzisa fillers
Ngokubukeka, ungabona ukuthi lokhu kwanda ku izibunu - izithombe ngaphambi nangemva inqubo exhunywe impahla. Nokho, ngaso sonke isikhathi umphumela langempela Kuyokwenziwa okufanayo njengoba ekhasini ozithandayo tabloid bubuhle.
Kodwa kuyafaneleka ukuthi nokwengezwa buttock ne asidi i-hyaluronic, kanye nanoma yimuphi omunye ingxenye yomzimba, it has izinzuzo ezilandelayo:
ungazama njengoba ubungenza nge volume entsha isikhathi esithize;
umzimba is hhayi obala izidakamizwa izinzwa;
uyadabuka kanye nezibazi nale ndlela ngeke;
Ngokungafani ukuhlinzwa plastic, isikhathi yokutakula kuyoba sifushane futhi kulula.
Nemibi asidi i-hyaluronic
Kodwa thina asinakulokotha sizifake ngokuqiniseka ukuthi ukwanda izibunu ngale ndlela - isinqumo esihle. Kunezindlela eziningana futhi umehluko wemisindo nemiqondo yamagama yayo.
Ngokwesibonelo, ijeli ingasetshenziswa ukuze uthuthe. Yingakho akunakwenzeka ukungena eziningi ukunikeza semali ngezingxenye ezikhethwe umzimba. Kungase uye ngezansi kanye izindebe noma izibunu ngeke ehle ngaphansi isisindo namandla adonsela phansi. Uma ugudlula ke, susa izindlela. Futhi lapha kakade udinga ukuhlinzwa.
Enye inkinga - wukuthi ijeli ancibilikisa ngokuhamba kwesikhathi. Uyaphikelela kwezicubu izinyanga ezingu-18 esiphezulu. Uma ufisa ukwenza ukwanda izibunu, okunikezelwayo isithombe sikhombisa kulesitfombe amahle kuqinisekisa nomphumela owaqhubeka isikhathi eside, kungcono hhayi ukuthemba isithembiso esinjalo. Eqinisweni inani gel injected kuyehla ngemva kwezinyanga ezimbalwa, ngakho ngemva cishe izinyanga eziyisithupha, isikhumba bangase baqale ehle. Ukuhlela uhambo once more on inqubo okudinga ukulungiswa.
Njengezinye izinto angaphandle, asidi i-hyaluronic kungabangela ukuthuthukiswa cystic.
Khumbula ukuthi nokwengezwa buttock kungaba isithiyo abalulekile by odlula uchungechunge nokuhlolwa odokotela. Ngakho, izigaxa gel ebonakalayo qapha uma ultrasound kanye x-ray. Kulokhu, ngokusobala, abazi zehluke simila noma izimvu zamanzi. Ngakho, udokotela angase abeke ukuxilongwa zamanga.
Ijeli uyakwazi zizogcinwa ezicutshini yethu isikhathi eside ngokwanele. Futhi ngisho nangemva resorption wako ungakapheli nonyaka ngemva izinqubo zakhe umhlambi wezimvu nezimbuzi ungase kubhekwe kwi ultrasound. Uma umbuzo mayelana webele nokwengezwa, izinsalela ijeli ebeleni kungaba izinkinga sitholakele mastitis noma umdlavuza.
Izimo ukusetshenziswa fillers
Odokotela banelungelo lokwenqaba ukuya ngisabone imitholampilo bekezela ngaphakathi the inqubo contouring usebenzisa asidi i-hyaluronic ngenxa yezizathu ezilandelayo:
uma umuntu ukungabekezeleli maqondana kule ndaba;
uma esikhathini esidlule babe uthuthumele anaphylactic noma yokungezwani komzimba polyvalent;
ngesikhathi ekhulelwe noma ukuncelisa ibele;
ebukhoneni izifo sokuhlasela kwamasosha omzimba;
ukuhlelwa kwesikhala sezinhlamvu
uma uthatha anticoagulants futhi coagulation iziyaluyalu.
Uma kuziwa okwandisa webele ivolumu, ngaphambi inqubo, qinisekisa ukuthi sithole ukuthi emkhakheni zamanzi noma izinhlumba.
Inqubo kungase kube nemiphumela yayo, ngisho uma isiguli ayinakho Izimo. Ngakho-ke, uma kungekho isidingo esikhulu, acabangisise ukuthi udinga ukukhuphula ezinqeni. Ngaphambi nangemva ukuhlinzwa - abayikho izikhathi ezimbili ezihlukene: ecaleni lokuqala kungenzeka ukucabanga konke kuhamba kahle, futhi okwesibili - ukwazi indlela yokubhekana imiphumela engemihle.
Ngakho, ngokuvamile ngemva kokuhlinzwa avele ukuvuvukala kanye ongama 2 amaviki, kodwa ke zinyamalale. Ngaphezu kwalokho, phakathi ngemva kokuphathwa isiguli izinsuku zokuqala okungenzeka ukuhlupha gel isiyaphuma ubuhlungu. Bangakwazi eshelelayo ngokuthola analgesics.
Ngezinye izikhathi kophawu zingavela, inkathi banemvelaphi nemvelo zihlale ezahlukene. Ngokuvamile zibonakala ngokushesha ngemva kokuhlinzwa. Futhi okunye, njengoba zokunciphisa edema kanye isikhumba elula izimpawu, izindwangu babe ethambile futhi nokunwebeka ngaphezulu. Experience akudingekile.
Kodwa uma seal ezifana isikhathi eside noma avele ngemva kwenkathi ende emva inqubo, kungcono uye kudokotela uyofuna icebiso.
Izibuyekezo Ochwepheshe mayelana izidakamizwa
Umuthi 'Macrolane "esekelwe asidi i-hyaluronic has a ukuhlolwa kunalokho engqubuzanayo wezazi mayelana nokuphepha nokuphumelela kwaleso sembatho.
Ingabe ungakwazi ngaphandle kwezinkinga buttock nokwengezwa? Uphenyo odokotela abavela emazweni ehlukene kule ndaba zingase zihluke kakhulu komunye nomunye. Lokhu kugcizelela kusekelwe yokuthi "Macrolane" emakethe esanda kutholakala futhi angakafakwa wafunda ngokugcwele.
Ukungabikho izinzwa, futhi yokutakula imisebenzi, + njengasosukwini lokungivivinya plastic zakudala - konke lokhu bakhangwa le ndlela iziguli ezengeziwe.
Kodwa ngakolunye uhlangothi, kukhona nakho okubuhlungu ukusetshenziswa kwezinye izindlela non-kuhlinzwa ngenxa yokwanda ezinqeni noma amabele ngesisekelo the excipients. Liquid abicah, upharafini, ezilwane kanye polyacrylamide gel - bonke bangabafundi nezitha ezingaba yingozi iziguli abasebenzisa lezi izingoma ufuna ukubukeka kangcono.
Izimila noma fillers?
edlule Umhlaba Association of Plastic Odokotela abahlinzayo iminyaka engaba ngu-10 waqaphela ukuthi indlela engcono kakhulu ukwandisa webele izimila kukhona abicah. Futhi okunye yabo eyinhloko - ke lipofilling. Ngaphansi le nqubo ichazwa ngokuthi esasikhipha isiguli amafutha sakhe, nakho ezimweni eziningi kungenziwa olunye ahlanganiswe stem cells. Le ndlela iphephile ngoba okuqukethwe akuyona "bomdabu" umzimba womuntu.
Kodwa asidi i-hyaluronic, okuyinto esebenzayo izidakamizwa "Macrolane", futhi ingxenye yemvelo maqondana umzimba wethu. Futhi ngokuvamile si kwezindlu kusekelwe kuyo zisetshenziselwa ukwandisa izindebe, izibunu, noma amabele, kanye ekuthuthukiseni nentaba ebusweni. Kodwa isenzo ithuluzi kukhawulwe ngoba ancibilikisa ngokuhamba kwesikhathi. It kuncike kwabantu yamathebhu kanye nenani lemithi asebenzayo esimweni ngasinye.
Nokho, abadali leli thuluzi unqume ngcono. Ngakho, ijeli, lapho ivolumu ukulungiswa kwenziwe eyodwa noma enye ingxenye yomzimba, uyakwazi ukuba busuka izingqimba isikhumba ejulile. Effect isikhashana, kuze kube izinyanga ezingu-18 ngokumelene odlule 9.
Ikakhulukazi ukwethulwa ijeli
Ukusebenza ukwandisa ezinqeni esikhathi esifushane, oda ezithatha ihora noma ngaphezudlwana. Udokotela wenza ukusikeka ukuze 3 mm futhi inaliti esihle ungena isikhumba impahla esekelwe asidi i-hyaluronic. Lokhu kwenziwa kakhulu ngempela ku izingqimba kwemisipha. Cishe ngemva kwehora kube sekupheleni inqubo, isiguli angashiya emtholampilo bese ubuyela ekuphileni kwabo evamile. Ngaphansi kwethonya okushisa amaprotheni yemvelo ne isikhathi ijeli ancibilikisa. Uma lokhu kwenzeka, kumele kabusha keying, uma kunesidingo.
Ngakolunye uhlangothi, indlela enjalo uphelele, kodwa kumelwe singakhohlwa ukuthi nokwengezwa buttock ngale ndlela namanje awunakuba khona ngaphandle kokuthethelela ukusikeka, ngisho ezincane. Liphinde okwamanje wafunda ngokugcwele ukuziphatha ndaba ezingqimbeni ezijulile kwesikhumba, kufanele futhi kucatshangelwe.
Uma uthi nhlá, inqubo kanye izidakamizwa akanayo amaphutha. Noma kunjalo, ukusikeka, nakuba ezincane, kodwa kukhiqizwa. Isenzo "Macrolane" okwesikhashana, futhi ukuziphatha yamathebhu ku dermis ezijulile kahle wafunda.
Manje phenya incazelo enye indlela okwandisa izibunu - ngokusebenzisa izimila abicah ezisekelwe noma lipofilinga. Konke lokhu okuhloswe ngayo ukwenza ngcono isimo sabo futhi phakamisa engxenyeni engenhla.
Lapho izibunu ziyakhishwa futhi podyagodichnye imibimbi eshelelayo, kuyinto efiselekayo ukukhulisa. Ngokuvamile lokhu isimo kungenxa eqinile kwesisindo, lapho ukuvela umzimba isikhumba esilengayo droops izicubu zomzimba ezithambile. Izinqe Ukwandiswa izimila engenziwa noma njengenhlangano inqubo ezimele, futhi ngesikhathi esifanayo kokuqina okhalweni.
Sibekezele ngaphambi lo msebenzi ubophekile ukuba ibhekane kokuxilongwa kanye nezivivinyo ukuthi uzolunga ezinsukwini ezingu-3 noma ngaphansi. It wenziwa esibhedlela, kuye ngokuthi lemali, iklayenti esibhedlela kuze 5 izinsuku. Futhi esetshenziswa ukubulawa kwezinzwa okuvamile. Isikhathi lokhu msebenzi amahora angu-2.
Phakathi, kwaze kwaba sezinqeni ku udokotela coccyx kwenza i obuphelele imbobo ye mayelana 6 ngamasentimitha. Khona-ke umuntu imisipha enkulu ukwakha isikhala lapho nendawo izimila. Futhi lapho lipofilinga abamhlaba isikhumba futhi kamuva izibazi.
Ngokwandisa imbobo hip wenziwa crease ngaphansi izibunu, ngenkathi ukusebenza elihlangene - ngenhla kubo. Isilonda ke sutured suture intradermal. Emva inqubo isiguli izinyanga 4-6 kuyinto kokucindezelwa ingubo ekhethekile.
Okokuqala, isiguli uyozizwa izinhlungu nokuphatheka kabi. Konke lokhu kuyinto evamile, lezi zimpawu kuzodlula cishe ngo 2 amaviki. Kamuva esifanayo yena uzokwazi Nokho, ubuyele umsebenzi wabo ngokomzimba langaphambilini, ukuze sihlanganyele emidlalweni kungaba izinyanga unyaka nesigamu.
ukusebenza ezinjalo kungabangela imiphumela elandelayo;
displacement we sokwenziwa.
Ngokuphambene, imijovo asidi i-hyaluronic, umphumela kuyoba unomphela. Nokho Kuncike, uma umuntu ngeke silondoloze isisindo esifanayo lomzimba wakhe.
Nobufakazi hhayi kuphela
Mayelana nenqubo efana nokwenyuka ezibalweni ezigcwele izibunu, imicabango yabantu zahlukahlukene. Ezinye iziguli esekhala ukuxakeka. Ikakhulukazi, yokuthi ijeli ogeleza usuka kolunye uhlangothi kuya kolunye, futhi umphumela ezibukwayo akulona ekahle kakhulu. Abanye bathi kukhona izimo eziningi izinkinga ngemva kokuhlinzwa, futhi ijeli esekelwe asidi i-hyaluronic ngokuya izinga kungekho kangcono kunalena esetshenziswa ngaphambi futhi zazibhekwa njengokuphela sibi kakhulu.
Kukhona izindlela ezinhle nokuhlola. Ochwepheshe kanye neziguli abavamile ningakholwa ukuthi asidi i-hyaluronic - lena panacea, kodwa uma isetshenziswa kahle, isebenza kahle kakhulu. Ikakhulukazi, abasebenzi isiqinisekiso, izimila ukunikeza yezinkinga okuningi.
Phakathi kwalabo ngempumelelo sekudlule ukusebenza ukwandisa izibunu, kwamathanga nezinye izingxenye zomzimba ngosizo fillers, abaningi bakholelwa umkhiqizo kancane overpriced ngoba zokukhwabanisa.
Ngakho, kuze kube manje, buttock nokwengezwa asidi i-hyaluronic kuyinto ehlukile engcono nzima amasu kuhlinzwa, okungaholela eziningi side effects kanye nemiphumela.
Uyini amabele ijabulise futhi indlela okubukeka ngayo?
Indlela ukuqeda emphethweni Nasolabial?
Izindebe amatomu engenhla: umthetho ukwelashwa ukwephulwa
Ubani can Rhinoplasty
Syndrome Mowgli. Izingane abakhuliswa izilwane. izingane Mowgli
Welulekela - Welulekela, eguquguqukayo kanye nomuzwa omkhulu!
Homemade laser - Yinganekwane Noma Yiqiniso?
"Tarceva '(erlotinib): the nozakwabo intengo. Njengoba ukuthenga a "Tarceva"
I izakhiwo eziyingqayizivele ukotini - material yemvelo
Izinhlobo nobukhulu sokuzivivinya ngoba ukhonkolo Punch
Izinhlangano Inyunyana esikhathini esidlule nezamanje